TAARIIKHDA XIDIGA KUBADA CAGTA EE CRISTIANO RONALDO (Qaybtii 2aad) –
Home Cristiano Ronaldo TAARIIKHDA XIDIGA KUBADA CAGTA EE CRISTIANO RONALDO (Qaybtii 2aad)
TAARIIKHDA XIDIGA KUBADA CAGTA EE CRISTIANO RONALDO (Qaybtii 2aad)
Xariif.net-Halkan waxan kasii wadi doonaa Taariikhda xidiga kubada cagta ee Cristiano Ronaldo,Qaybtii 2aad
Si kastaba ha ahaatee, xagaagii 2003dii, markii Sporting uu ka horyimid Manchester United islamarkaana ka adkaaday, Cristiano ayaa soo jiitay tababaraha Manchester United Sir Alex Ferguson. waan ciyaartii uu cristiano Ronaldo u sababtey inuu imaado manchester united
Ka dib xilli ciyaareed guulo leh oo u ciyaaryey kooxda Sporting oo keentay ciyaaryahanka da’da yare inuu u ciyaaro kooxda ugu waa weyn Yurub, Ronaldo ayaa la saxiixday Manchester United 2003dii.
Ronaldo ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee u ciyaara Manchester United ee u dhashay reer Portugal. Ugu horreyntii, wuxuu codsaday lambarka 28 inuu yahay nambarka maaliyadiisa uu xidhan doono sababtoo ah ma uusan dareemin inuu ku noolaan karo cadaadiska ciyaartoydii hore sida George Best iyo David Beckham oo soo xirtey lambarka 7-aad.
Sannadka 2006 ilaa 2008 ayaa cadeeyay inuu yahay sanadka muranka badan ee xiddiga. Koobkii Adduunka ee 2006, Cristiano ayaa wajahay eedeymo ku saabsan kubada cagta. Kulankii quarter-final-ka ee ka dhacay England, waxaa si aad ah loogu dhaleeceeyay iney isku dhaceen oo dagaal dhex marey isaga iyo saaxiibkiisa kooxda Wayne Rooney kaasoo ciyaarayay xulka England.
Waxa uu ahaa dareen deg deg ah isla markaana wuxuu ku dhowaaday inuu noqdo mid ka mid ah weeraryahanada ugu fiican ee ciyaarta. Xilli ciyaareedkiisii ​​ugu fiicnaa ee United wuxuu ahaa 2007-08, markii uu dhaliyay 42 gool oo uu u dhaliyay League Cup, waxaana uu ku guuleystay abaalmarinta kabaha dahabka ee gooldhalinta Koobka Yurub, isagoo dhaliyay 31 gool.
Ka dib markii uu United ka caawiyay inay ku guuleysato Champions League bishii May 2008, Ronaldo ayaa qabtay Fédération Internationale de Football Association (FIFA) xiddiga sannadka adduunka ee abaalmarinta sanadka 2007-08. Waxa uu sidoo kale United u horseeday inay ka soo muuqdaan finalkii Champions League ee 2009kii oo ay ku guuldareysteen inay ka guuleystaan ​​FC Barcelona.
Si kastaba ha ahaatee, Ronaldo ayaa laga iibiyey Real Madrid oo aheyd kooxdii uu muddo dheer u ciyaarayay, waxaana lagu iibsaday 80 milyan oo ginni.
Halka goolasha uu dhaliyay uu sii wato kooxdiisa cusub, waxaana uu dhaliyay 40 gool taariikhda La Liga intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2010-11 (rikoorkiisa ayaa jabay xilli ciyaareedkii xigay iyagoo ku tartamayey Lionel Messi oo Barcelona u ciyaarayey).
Sanadkii 2011-12 Ronaldo ayaa Madrid ka caawiyey inay qabato horyaal La Liga ah, waxaana uu dhaliyay 46 gool xilli ciyaareedkan horyaalka.
laso Qaybta 3aad Taariikhda Ronaldo
la wadaag Asxaabtaada oo share garee
Turjumidii iyo diyaarintii Mohamed Ali